Isikhundla ezindawo ka leli zwe like laba njalo nomthelela ekuthuthukisweni yayo, hhayi kwezomnotho kuphela, kodwa futhi bebonke. Uma sikhumbula esidlule futhi silalela lokho isimo abadlale indima ebalulekile kakhulu ekuthuthukiseni abantu, singabona iphethini eziqondile. It bekulokhu ezweni ngasolwandle. Isibonelo salokhu eFenike futhi IGrisi yasendulo, eSpain nasePortugal, naseFrance, nabanye abaningi.
Ukufinyelela zolwandle ukusondela kuyo imizila yohwebo emhlabeni emazingeni athile yomlando wenze ushintsho ayisisekelo nekusasa lezizwe eziningi. Lokhu kubonakala ngokucacile ngesibonelo ka ephakathi eYurophu. amazwe Maritimes Mediterranean amabombo Venice ngemva abaseTurkey uvale ukufinyelela kwazo ku-India, ngokushesha zahileleka labhidlika. esifundeni sase-Atlantic isimo, sibambe yayo ngasolwandle indawo, angavuka ngokushesha - ekuqaleni kwenzile eSpain nasePortugal, kwalandela Netherlands neFrance. Emakhulwini eminyaka amathathu umzabalazo eziphikelelayo ngokumelene kuyo oye wakwazi Ukunqoba, eNgilandi, naye waba namandla enamandla zasolwandle.
amazwe Coastal zomhlaba, elwa for mkhulu ku-isikhala kolwandle, hhayi kuphela wenza okukhulu okutholakele ezindawo ka emazweni amasha, kodwa futhi yamvuthela kwemizila emisha ulwandle kwezohwebo.
uthi Coastal yeYurophu namuhla
Europe Kugcwele impucuko izwe wenza izwe, esisogwini olusentshonalanga iMedithera. States kanye ukufinyelela Atlantic Ocean, inkazimulo aseYurophu omkhulu okutholakele womhlaba. amazwe Coastal esifundeni namuhla ahlale izindima ehamba phambili.
Iningi amazwe aseYurophu has imingcele zasolwandle kanye iseduze umatasa lokuthumela ezibanzi. Futhi esikhathini sethu kubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni umnotho ngempumelelo, ngoba kuyacaca ukuthi amaningi zonke izimpahla emhlabeni (izibalo zibonisa ukuthi cishe angu-90) is uthuthwa ulwandle.
Ukuphila uthi amaningi aseYurophu bezilokhu exhumene kolwandle. Emave lanjalo ngalokuvamile ugu njengoba Great Britain, Iceland, Norway, Denmark, njalo wahlanganyela ukudoba ngempumelelo. Ezinye izindawo elincane isimo ozama ukuba alandise ngala ezindaweni ezisogwini wezilwandle bandisa insimu yabo. Ikakhulukazi eNetherlands baye baphumelela, ngaphakathi namakhulu ambalwa eminyaka ngemva cishe ingxenye yesithathu endaweni yabo wabophula kusukela olwandle.
indawo Seaside kuyazuzisa
Lonke umlando lwesintu kufakazela lesi saga esidala ukuthi isihluthulelo ukuchuma izizwe ahlule zezilwandle. Engingakusho nje kokukhumbula lasendulo eRoma, Genoa, Holland, eNgilandi. Amazwe amaningi ugu Asian ikhonze njengomPristi ubufakazi obuphathekayo balokho. Lokhu awasebenzi kuphela esikhathini esidlule kodwa kuze kube manje. Wonke amandla abacebe kakhulu emhlabeni bahlanza ngasemanzini wezilwandle nasolwandle: US, eJalimane, eSweden, Japan, China nabanye abaningi.
Ukungatholakali kwamanzi omkhulu is hhayi kuphela kuvimbela ukuthuthukiswa, kodwa kungaba usizi olukhulu. Kusasele iminyaka engaphezu kwekhulu edlule, Bolivia ngemva kwempi ne Chile ilahlekelwe ukufinyelela Pacific Ocean futhi, naphezu kweqiniso lokuthi izwe has a lasolwandle , futhi minyaka yonke kuba igubha uSuku kolwandle, amatilosi saseBolivia nje ISIFISO esidlule.
Rose Beige: izinhlobo, isithombe. Inhlanganisela sezimbali
Trattoria "Papa Carlo" (Novosibirsk): imenyu, Interiors, ukubuyekezwa